ရန်ပိုင်| December 19, 2012 | Hits:6,484
ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့် အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေ ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ဖို့လိုပြီအစဉ်အလာ ကြီးခဲ့သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တရားဝင် ရပ်တည်နိုင်ရမည်“လူတိုင်း အကျုံးဝင်တဲ့ ပညာရေး ဖြစ်လာအောင် ဖော်ဆောင်မယ်”အင်းကြီး တောင်သမန်
ကျော်သူထွန်း December 19, 2012 - 6:49 pm သတင်းကတော့မကောင်းဘူး။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 20, 2012 - 3:50 am ကိုကျော်သူထွန်း ပြောတာ လက်ခံတယ်။ အခုဆိုရင် ဆရာတို့ အနယ်နယ်မှာ တက္ကသိုလ်ဆရာတွေတင်မက အထက်တန်းဆရာတွေ သမဂ္ဂ ဖြစ်ဘို့ စည်းရုံးနိုင်ပြီ။ မလျော့တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို လေးစားပါတယ်။
Reply ပြည်သူ December 19, 2012 - 9:16 pm စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေမကုန်သေးကြောင်း ပြည်သူကိုမက်ဆေ့ခ်ျပေးချင်တဲ့သဘောနဲ့တူပါရဲ့။ အင်း….. ပြောင်းလဲတယ်သာဆိုတာတကယ်တော့ခရီးက ၁၀%လောက်ပဲပေါက်ပါသေးလား။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါဧ။်.
Reply Aung Khin December 19, 2012 - 9:52 pm ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးမြအေးက ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို
Reply Shwe Yoe December 20, 2012 - 6:52 am They need to formacommittee to investigate the motive throughalawyer. If the government is cleverly transferring them, let the pay the price. Havinga“Teachers’ Union” isagreat thing. If the government has problem, this is the government problem, not the teachers. Students’ Union and Teachers’ Union are very important to have successful institutions. It is even more important than Ministry of Defense. When there is no more civil war, the Union of Burma will no longer need Ministry of Defense. Because no country will come and invade us. However, education will be always important until the end of the earth.
Reply San Shwe December 20, 2012 - 1:17 pm Transfer orders effect to hundred of university staffs, not only for union members.
Reply စိမ်း December 20, 2012 - 1:27 pm ပညာတတ်သူတွေ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာပြီဆိုရင် သူများတွေထက်ပိုတယ်တဲ့။
Reply ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ဓာတုဗေဒဌာနမှ ဆရာတစ်ဦး December 20, 2012 - 2:38 pm ဒါဟာထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး ၀န်ထမ်းဆိုတာ သူ့အချိန်ကျရင်တော့နယ်ပြောင်းခံရမှာပါပဲ
Reply yemyn December 20, 2012 - 2:45 pm This is one of the sign of Military government policy “Pressure on Educated people”. Government only thing about their stability.Try to do the strong association in all university.This is very important. Try prevent in Myanmar one party control system(Kyat Phut party +Military +Ex army control system).
Reply luhsoe December 20, 2012 - 3:36 pm ၀န်ကြီးက စေတနာနဲ့ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စေရန်ပြောင်းတာပါ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 21, 2012 - 3:55 am ဟုတ်ပါ့။ အစိုးရ စရိတ်နဲ့ နယ်တွေမှာပါ စည်းရုံးရေး ဆင်းတာပေါ့။
Reply သပန ဆရာမတစ်ယောက် January 6, 2013 - 10:23 pm ကျွန်မတို့ သိပ်ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနလည်း အတူတူပါပဲ။ Transfer မလုပ်တာ ၃နှစ်ရှိပြီ။
Reply jame8282@ January 10, 2013 - 8:50 am ကိုကျော်သူထွန်းပြောတာ မှန်တယ်